व्यवसायको लागि लगानी कसरी जुटाउने ? - Tree Media News
कुनै पनि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नको लागि केहि पुँजी/लगानीको आवश्यकता पर्छ । सुरुवाती दिनमा गरिने यस्तो लगानीबाट व्यवसायको लागि चाहिने ठाउँ, उपकरण, फर्निचर, फाईल, बिल, व्यवसाय दर्ता जस्ता कुराहरुमा खर्च गर्न सकिन्छ । तर धेरैजसो समय यो खर्च जुटाउनै धेरैलाई मुस्किल परि रहेको हुन्छ । यस्तो लगानी रकम जुटाउने केहि उपायहरु निम्न छन्:
अगाडीबाट नै बचत गर्न सुरु गर्ने
भविष्यमा सुरु गर्ने व्यवसायको लागि अगाडीबाट नै योजना बनाइ बचत गर्न सुरु गर्ने हो भने व्यवसायको लागि लगानी जुटाउन गाह्रो पर्दैन । दैनिक ५० रुपैया मात्रै जम्मा गर्ने बानि बसाल्ने हो भने एक बर्षमा करिव १८ हजार ३ सय रुपैया जम्मा गर्न सकिन्छ ।
व्यवसाय सुरु गर्नु अघि आफ्नो योजनाको बारेमा आफ्नो नातागोता, साथीभाई, आफन्तलाई राम्रोसँग बताई उनीहरुलाई भविष्यमा फिर्ता गर्ने सर्तमा अहिले लगानीको लागि चाहिने रकम सापटी माग्न सकिन्छ । यसरी सापटी लिदा भविष्यमा रकम फिर्ता गर्ने समय, व्याजदर, फिर्ता गर्नु पर्ने रकम सबै उल्लेख गरि एउटा कागजमा लेखि दुवैजानाले सहमति स्वरूप हस्ताक्षर गर्न छुटाउनु हुन्न । यसो नगर्दा पैसाको कारण दुश्मनी पनि बढ्न सक्छ ।
सहकारी, माइक्रो फाईनान्स् वा बैंकहरुबाट ऋण लिने
यदी तपाई स्थानीय सहकारी संस्थाको सदस्य हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि ऋण लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । स्थानीय सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो सदस्यहरुलाई बिना धितो नै ऋण दिने गर्दछन् । त्यस्तै हिजोआज माइक्रो फाईनान्स् कम्पनीहरु र बिभिन्न बैंकहरुले पनि व्यवसायिक कर्जा दिने गरेको भेटिन्छ । जस्तै: हिमालयन बैंकको जस्तै: हिमालयन बैंकको स्मल पर्सनल बिजिनेस लोन, ग्लोबल आई एम ई बैंकको ग्लोबल स्मल बिजिनेस लोन
सुलभ कर्जा र अनुदान लिने
समय समयमा निभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरु र नेपाल सरकारले पनि व्यवसाय गर्न चाहाने युवाहरुको लागि सुलभ ऋण र अनुदानहरु दिने गर्दछन् । नेपाल सरकारको युवा स्वरोजगार कोष पनि यसको एउटा उदाहरण हो ।
के आजै बाट व्यवसायको लागी लगानी जुटाउने हैन त ?
Previous Postनियमन सम्बन्धी सहकारी विभागको सूचना_______Previous Post
Next Postविश्व बैंकको प्रतिवेदनप्रति सरकारको आपत्तिNext Post